Namathisela Fish. zokupheka elula
Fish unamathisele, kuphekwe ekhaya, bangaba umhlobiso kunoma ithebula iholide. Uma ufuna Ngamangala umndeni nabangane nge appetizers elikhanyayo wokuqala, bese sicela ufunde lesi sihloko.
Lena isidlo emangalisayo uphelele kulabo emini ukusebenza akanayo isikhathi ngokugcwele kwasemini ngenxa isikhathi izingqinamba. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukulungiselela ke ukuze libe epikinikini, uma ngokungazelelwe anqume ukuphuma nabangani babo ubunjalo noma izwe. Yini imikhiqizo sisebenzisa:
500 amagremu umucu - uma ungakwazi ukukhokhela i izinhlanzi ezibizayo ke, esikhundleni saso alethe amamaki aphansi ngaphezulu (isib, cod).
300 ml uqweqwe cream esindayo.
amaqanda qanda amabili.
Usawoti kanye nezinongo.
Ukupheka okuzenzela izinhlanzi nokunamathisela:
Sika izinhlanzi ku izingcezu ezincane, asuse amathambo futhi uwafake endishini ejulile.
Qala Chop umucu blender ngesivinini aphansi, kancane kancane ukhilimu bese wengeza izinongo.
Eceleni uphehle amaprotheni usawoti baze iphenduke Foam obukhulu.
Xhuma yonke imikhiqizo, ukubeka mass okuholela epanini abicah ikhekhe.
Kwenye isitsha wokubhaka, mkhulu ngobukhulu, engeza amanzi, wasibeka endishini ikusasa pate futhi kuthumele wonke isakhiwo kuhhavini. isidlo esihlwabusayo futhi unempilo uzolunga cishe ihora.
Ukuze uwayehlalise ungase ajabulise umkhaya wakubo ezihlukahlukene flavour usuku ngalunye, kufanele ube isitokwe ezihlukahlukene original zokupheka. Futhi namhlanje sifuna ukukutshela imfihlo indlela yokwenza enongiwe izinhlanzi nokunamathisela ekhaya. Ngaye, uzodinga ukuthatha:
inhlanzi Red umucu (isib salmon) - 400 amagremu.
Umucu izinhlanzi emhlophe (ungathatha yedwa) - 400 amagremu.
Four amaqanda qanda.
500 amagremu of imfanzi.
Cream - 700 ml.
Fennel, amahlamvu isipinashi, pepper eCayenne, usawoti.
Ukusebenzisa ukudla processor we blender noma ezivamile inhlanzi inyama egayiwe (ebangeni ngalinye ngokuhlukile ezitsheni ezahlukene). Uma ufuna kokuqendwa izinhlanzi nokunamathisela Wayemnene ikakhulukazi, ungeqa okwengeziwe okuholela nengulube ngokusebenzisa ngesihlungo. Ngale ndlela balahle amathambo ezisele futhi ephule izingcezu ezinkulu. Hlanganisa amaprotheni nosawoti Foam obukhulu, uhlukanise ngesigamu u hlanganise izinhlanzi. Esikhathini yenkomo add ukhilimu izinhlanzi ezimhlophe dill futhi ochotshoziwe kanye pepper. Spinach akushiyela umusi kanye ukubeka phansi isimo elingunxande wokubhaka. Khona-ke walala mousse ulimi nezimfanzi ungqimba futhi ungqimba salmon nengulube. Vala isitsha ne ucwecwe, ngiyibeke phezu ugqoko ngamanzi Bhaka kuhhavini kuze kuphekwe. inhlanzi Colorful unamathisele Khonza chilled. Bon appétit!
Fish pate okusemathinini
Uma ngokungazelelwe kwehlela-ke izivakashi, ungakwazi ukubamangaza Ungadla okumnandi okulungiselelwe kusuka imikhiqizo elula:
Omunye Imbiza mackerel okusemathinini.
Anyanisi kanye imayonnaise.
Qoba zonke izithako processor ukudla inyama egayiwe, bese azihlanganise imayonnaise. mousse Ready wayimboza isinkwa, ama-crackers noma pancake bese bekhonza iziphuzo.
Terrine of herring usawoti
Lokhu Ungadla elungisiwe silungiselela nje:
Omunye isanqante nokukodwa inhloko onion ikhasi, Chop gazinga emafutheni zemifino.
Beka imifino esitsheni ezijulile kusetshenzwe, izingcezu inhlanzi no ibhotela kancane. Hlanganisa wonke izithako blender futhi ukukhonza ngomumo eyenziwe izinhlanzi pate ngezingxenye omisiwe esinkwa esinsundu.
Sandwich kungenziwa ehlotshiswe imifino, u-anyanisi, noma amakhambi.
Fish unamathisele kusuka trout ngabhema
Ngokucophelela izinhlanzi mousse babekhonza iminyaka ibhulakufesi ngeSonto, ayokwenza up wonke amalungu omndeni wakho. Ukuze wenze sandwich ayisishiyagalombili kumbe ayisishiyagalolunye, udinga ukuthatha izithako ezilandelayo:
250 amagremu izinhlanzi ezomisiwe.
150 amagremu ukhilimu ushizi.
Amakinati kanye emnyama ukunambitha.
Fish nokunamathisela ekhaya ibhalwe kanje:
Trout kufanele ahlanze, ukususa ikhanda, amathambo kanye isikhumba.
Izingcezu inhlanzi, kalamula futhi usike izithako asele, usebenzisa le njongo blender noma ukudla processor.
Ungqimba kwaphumela Ufakwa esitsheni sengilazi, amboze epulasitikini futhi esitolo in the esiqandisini.
Baguette uthathe tincetu nomzimba omncane, omisiwe kuhhavini noma kancane Fry epanini. izingcezu ukusabalala Baguette okuholela mass.
Siyojabula uma ukujabulela yasekuqaleni zokupheka pates ukuthi kuboniswe esihlokweni sethu. Manje ungenza Ungadla enhle nenempilo etafuleni samaholide kusukela inani lemali elincane ukudla. Khumbula ukuthi ifomu kubaluleke kakhulu lokupha izinhlanzi mousse. Uma ufuna ukujabulisa izivakashi zakho, wenze sandwich ku izinkwa mncane futhi kahle ukuhlela kwabo ngoqwembe. Njengoba umhlobiso, ungasebenzisa oluhlaza, caviar abomvu kanye nezimfanzi okuphekiwe. Ungesabi ukuba ulinge izithako futhi ushintshe indlela yokwakheka kokudla - kulokhu etafuleni lakho njalo kuyoba izitsha ezintsha kanye flavour emangalisayo.
Dish "curry": zokupheka ngezithombe
Pancake on lamanzi esiphethu. Indlela pancake okumnandi
Indlela ukubhaka amakhowe okumnandi futhi enhle kuhhavini?
Indlela ukupheka isaladi okumnandi utamatisi oluhlaza ebusika
Glaze cocoa: 'ibhulashi' ngokuba umculi Culinary
Ilya Balakhnin: biography, izincwadi, imiklomelo
Indlela ngokushesha ukwelapha amakhala yisisu
Ukufakwa othomathikhi umlilo ukucindezelwa (ukucindezelwa iyunithi)
Izidakamizwa "Chondroxide Forte." Yokusetshenziswa
Shanghai Metro: izici, Isheduli kanye fares
Dostoevsky, "I edelelwa kwalimala": isifinyezo, ukuhlaziywa kanye nokubuyekeza
Yini namanabukeni Ukukhetha kangcono omama abanolwazi